Archive du 27/03/2012
Mahomby ny paikadiny
Nanova paikady ny filoha Marc Ravalomanana amin�izao dingana misy ny famahana ny krizy eto Madagasikara izao.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Miaina anaty fahasahiranana mora ny vahoaka
Ny FAT mivazavaza hoe tia tanindrazana no tena tsy tia azy, hoy ny CST Randriamamizafy Ignace omaly tetsy amin'ny Magro Behoririka.
�Nifamaly tamin�ny minisitry ny atitany aho�
Vita omaly, tany Manakara ny famindram-pahefana teo amin�Atoa isany Rakamisilahy Martial, filohan�ny Faritra Vatovavy Fitovinany teo aloha, sy ny kolonely Mandehatsara Georget, filohan�ny faritra vaovao notendren�ny fitondrana tetezamita.
Olan�ny mpanao politika maro ny fodian-dRavalomanana
Ny fodian-dRavalomanana an-tanindrazana no olana ho an�ny mpanao politika maro eto amintsika ankehitriny, hoy i Vaovao Benjamin, sekretera �administratif�-n�ny antoko Arema sady mpikambana eo anivon�ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita, ary izay no mbola hahasarotra ny fanatanterahana ny eritreritry ny Amiraly Didier Ratsiraka hanaovana ny antsoiny hoe �Conf�rence au sommet�.
Ravalomanana mody sy milatsaka hofidiana no fantatray
Hevitra diso ny hoe tsy tafody indray ny filoha Marc Ravalomanana ka mangina, hoy ny CST Leriva Manahirana, omaly tetsy amin�ny Kianjan�ny Finoana Magro Behoririka.
Hamono afo any Manakara
Hafa kely ny fahatsiarovana ny faha-65 taonan�ny �29 martsa 1947� amin�ity taona ity, satria dia any Manakara, ao anatin�ny faritra Vatovavy Fitovinany, fa tsy any Moramanga tahaka ny mahazatra, no hanatanterahana ny lanonana amin�ny fomba ofisialy.
Hatramin�ilay zoma alina mahafinaritra nisehoanareo tele iny ry Jean dia lasa fanovozan-kevitra ho an�ny rehetra ilay fandaharan�ny namana mpanao gazety iny.
Hamita ny fampianarana ny SECES
Niharitra ny mafy nandritra ny efa-bolana sy tapany ny mpianatra eny amin�ny oniversitem-panjakana vao mihiratra ny masoandrony.
Ady amin�ny asan-jiolahy
Hiditra an-tsehatra ny tafika
Hihetsika ny tafika ka hanampy ny polisy sy ny zandary amin�ny fisahanana ny fametrahana ny fandriampahalemana eto Madagasikara.
Difotry ny fahefana
Nanome toky ireo mpanara-dia azy, telo taona lasa izay, i Andry Rajoelina fa hatao mangarahara ny fitantanana ny volam-panjakana.
�Mody ireo sesitany vao fifidianana�
Fanambarana miezinezina no nataon�ireo vahoaka mivondrona ao anatin�ny fikambanana Vondron�olon-tsotra manohana an�i Marc Ravalomanana (VOT) any Alaotra ny sabotsy 24 martsa teo.